Uluqhuba njani uhlalutyo lokhuphiswano lokuchonga amathemba okwakha amakhonkco | Martech Zone
Uwafumana njani amathemba amatsha e-backlink? Abanye bakhetha ukukhangela iiwebhusayithi ngesihloko esifanayo. Abanye bajonge izikhombisi zeshishini kunye neqonga lewebhu le-2.0. Kwaye abanye bathenga nje i-backlinks ngobuninzi kwaye bayathemba okona kulungileyo.
But there is one method to rule them all and it’s competitor research. Websites linking to your competitors are likely to be thematically relevant. What’s more, they are likely to be open to ubuhlakani be-backlink. Kwaye abo ukhuphisana nabo bawenze wonke umsebenzi wokubafumana, ke into ekufuneka uyenzile kukungena ngaphakathi kwaye uthathe awabo amathemba.
Kwesi sikhokelo, uya kufunda ukuba ubafumana njani abo bakhuphisana nabo bokwenyani, ufumane i-backlinks yabo, kwaye uboleke abo banamandla aphezulu.
1. Fumana abo bakhuphisana nabo bokwenyani
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufumanisa ukuba ngoobani okhuphisana nabo bokwenyani kwaye ukhethe ezona zilungileyo oza kuzihlola. Khumbula ukuba ukhuphiswano lwakho lokukhangela alufani ncam nabantu okhuphisana nabo bokwenyani. Endaweni yokuba ezi ziwebhusayithi zikwinqanaba eliphezulu kwiziphumo zenjini yokukhangela (IINKONZO), okt ngamagama aphambili kwi-niche yakho. Olu phando lunokukunceda ekuchongeni uqingqo-mali oluqikelelweyo yekamva lakho Iphulo lokwakha ikhonkco.
Eyona ndlela ilula yokubona ukuba ngoobani abakhuphisana nabo abaphambili kukuchwetheza amagama aphambili kwimbewu kuGoogle kwaye ubone ukuba yeyiphi imimandla ebonakala kuGoogle SERP rhoqo. Ngoku, uya kufumana ezinye iiwebhusayithi ezingaqhelekanga, ezinjengeMadoda yezeMpilo okanye iForbes okanye ezinye iimagazini zokuphila ezikumgangatho wamagama aphambili, kodwa, emva kokukhangelwa okumbalwa, kuya kufuneka unoluvo oluhle lokuba ngubani ngokwenene osebenza kwi-niche yakho.
Ewe kunjalo, ukujija onke amagama akho aphambili embewu kunye nokubhala iiwebhusayithi ezikwinqanaba lesininzi akulunganga. Ngethamsanqa, Uhlalutyo lokhuphiswano ngumceli mngeni oqhelekileyo kwii-SEOs kunye nabanini bewebhusayithi, ke kukho izixhobo ezininzi zobungcali ezinokukhawulezisa inkqubo. Ukuba sele usebenzisa isixhobo se-SEO, nokuba yiMoz, iSemrush, okanye iAhrefs, kunokwenzeka ukuba ubenendlela ethile yophando okhuphisanayo eyakhelwe ngaphakathi. Kuxhomekeka kwisixhobo se-SEO osisebenzisayo, uya kuba nakho ukufumanisa okhuphisana nabo kuphando ngesihloko okanye ngethambeka, okanye ngamanye amaxesha zombini.
Ukuchonga abo ukhuphisana nabo ngesihloko, Kuya kufuneka ufake amagama aphambili embewu kwaye isixhobo siza kufumana iiwebhusayithi eziphambili ezibekwe ngala magama aphambili. Le ndlela ikuvumela ukhethe i-cherry-ukhethe amagama aphambili kwaye ujonge abakhuphisana nabo kwi-niche emxinwa.
Ukuchonga abakhuphisana nabo ngethambeka, Kuya kufuneka ungenise indawo yakho. Esi sixhobo besiza kuhlalutya onke amagama aphambili ozibekayo kuwo kwaye ufumane iiwebhusayithi ezinegama eliphambili elingaphezulu. Le ndlela ikuvumela ukuba ufumane iiwebhusayithi ezikhuphisanayo ezifanayo newebhusayithi yakho, nangona i-niche inokubanzi kunokuba ubucwangcisile.
Nje ukuba ufumane uluhlu lwabakhuphisana nabo, uninzi lwezixhobo ze-SEO ziya kukuvumela ukuba uzivavanye usebenzisa uluhlu lweemetrikhi ezisemgangathweni. Ezona metric zixhaphakileyo zibandakanya igunya lesizinda, ukugcwala kwezinto eziphilayo, kunye nepesenti yamagama aphambili, okt iyafana njani iwebhusayithi yomntu okhuphisana nayo yeyakho. Sebenzisa ezi metric ukukhetha phakathi kwabakhuphiswano abakumgangatho ophezulu weshumi ukuya kwelishumi kuphando olongezelelweyo lwe-backlink.
2. Fumana i-Backlinks yaBakhuphiswano bakho
Nje ukuba uze noluhlu lwabakhuphiswano bakho abachaphazelekayo, ungahambisa ukuphanda iiprofayili zabo zangasemva.
Ukujonga ngokukhawuleza kwe-backlinks yomncintiswano, ungasebenzisa nayiphi na isixhobo sokujonga emva kwe-backlink. Chwetheza ithambeka ledomain okhuphisana nayo ukuze ubone awona maphepha adibanisa iwebhusayithi, ii-URLs abazidibanisa nazo, izicatshulwa ze-anchor, uluhlu lwedomeyini, nokuba ikhonkco liyalandelwa okanye akunjalo:
Ukuba ufuna ukwenza uphando oluthe kratya kwii-backlinks zakho okhuphisana nazo, kuyakufuneka usebenzise isoftware ye-SEO. Isixhobo sohlalutyo lokukhuphisana esizinikeleyo siya kukuvumela ukuba uphande abakhuphisana nabo ngaxeshanye, kunye neefilitha zokufumanisa i-backlinks ngogunyaziwe, indawo, iithegi ezingenanto, umngcipheko wesohlwayo kunye nezinye iiparameter:
Ngokuqinisekileyo, enye yezona zinto zibalulekileyo kuphando lwe-backlink kuxa unokubona ukuba zeziphi iiwebhusayithi ezidibanisa ezimbini okanye ngaphezulu zabakhuphisana nabo. Ezi webhsayithi zizinto eziphambili ze-backlink ze-backlink-zinokuthi zisebenze ngaphakathi kwe-niche yakho kwaye zingenakukwazi ukuba nobambiswano olukhethekileyo kunye nabani na okhuphisana nabo.
3. Khetha iThe Strlink Backlink Prospects
Nje ukuba ukhuphe uluhlu olupheleleyo lwe-backlinks yakho okhuphisana nayo, kunokwenzeka ukuba ube namawaka, ngamanye amaxesha amashumi amawaka eewebhusayithi ezinokubakho. Ngokucacileyo maninzi kakhulu ukuba angaqhuba iphulo lokufikelela. Ngaphandle koko, ukukopa ngokungaboniyo konke ukubuyela umva kwamashishini okhuphisana nawo ayisosona sicwangciso silungileyo, njengoko ezinye zazo zinokunika i-backlink esemgangathweni esezantsi eya konakalisa i-SEO yakho kuphela.
Ukunciphisa uluhlu lwethemba lakho le-backlink ukuya kubungakanani obunokulawuleka, kufuneka ulahle iwebhusayithi enikezela nge-backlink esemgangathweni esezantsi. Ezona zinto zixhaphakileyo ezibonisa umgangatho wethemba le-backlink zibandakanya:
Igunya lendawo. Ephakamileyo, kulunge. Imimandla ephezulu yegunya ziiwebhusayithi ezinee-backlinks ezininzi, umxholo ekumgangatho ophezulu, kunye namava omsebenzisi olungileyo, kwaye ke ngenxa yoko kudlula igunya elingaphezulu kwizikhonkco zabo.
Dofollow / nofollow. Ngokungafaniyo namakhonkco angenanto, amakhonkco alandelayo anokukwazi ukuhambisa ijusi yekhonkco kwiindawo ezisiya kuzo. Amakhonkco alandelayo awasasebenzi ngokupheleleyo, kodwa awabangeli galelo kwizinga lakho. Kulungile ukuba unamakhonkco alandelayo kwiprofayili yakho, kodwa akufuneki uchithe izixhobo zakho ukufumana uninzi lwazo.
Ukuqhagamshela okungaphezulu. Njengoko sele kukhankanyiwe, imimandla edibanisa amabini okanye nangaphezulu okhuphisana nawo abaluleke kakhulu njengamathemba e-backlink.
Umngcipheko wesohlwayo. Amakhonkco avela kwiiwebhusayithi ezimdaka ezinomxholo obhityileyo okanye ongenantsingiselo, iitoni zentengiso, kunye namava amabi omsebenzisi anokukufaka emanzini ashushu ngeGoogle.
Kuxhomekeka kwisixhobo se-SEO osisebenzise ukuqokelela i-backlink prospects, uya kuba nakho ukusebenzisa ezinye okanye zonke ezi paramitha zilapha ngasentla ukucoca uluhlu lweelinki zangasemva. Ukuthatha iMoz njengomzekelo, uya kuba nayo DA kwigunya lesizinda, Amanqaku eSpam, yaye IiSayithi ezinqamlezayo:
Ezinye izixhobo ze-SEO zinokuba neemetri ezahlukeneyo okanye amagama ahlukeneyo kwiimeta ezifanayo, kodwa inkqubo iyafana. Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi imingcele yakho (umzekelo, igunya lewebhusayithi> 60; umngcipheko wesohlwayo> 50) kwaye ucofe ithemba lakho ngokufanelekileyo. Tune iisetingi zakho de ube ushiywe linani elonelisayo lamathemba kwaye olu luluhlu lwakho olufutshane.
4. Qalisa amaphulo okufikelela ebantwini
Ngoku ukuba unoluhlu olufutshane lwethemba elinokubakho eliphezulu, lixesha lokuba ubone ukuba nguwuphi kubo oya kukulungela ukusingatha i-backlinks yakho.
Inyathelo lokuqala kwiphulo lakho lokufikelela kukwahlulahlula amathemba akho ngokwamacandelo ahlukeneyo kwaye ukhethe indlela efanelekileyo yokwakha unxibelelwano necandelo ngalinye. Vula amaphepha owakhethileyo kuluhlu lwakho olufutshane, kwaye ujonge ukuba zeziphi ngqo ii-backlink ezibekwe kwiphepha. Yahlula-hlula amathemba ngokomxholo we-backlink.
Nayi imizekelo yezinto ezinokubonakala ngathi imeko ye-backlink:
okubhalwe ngasezantsi kwephepha kwiwebhusayithi;
amacandelo amaqabane oshishino;
Ukuba usebenzisa isoftware yokufikelela eluntwini, uya kuba nakho ukumakisha amathemba akho apho. Ukuba akunjalo, kopisha i-backlink prospects domains kwi-Excel spreadsheet, uze uphawule iindidi kwikholam elandelayo:
Emva koko unokuhlela amathemba akho ngokwamacandelo, ufumane iinkcukacha zonxibelelwano, kwaye uqalise ukufikelela kwakho. Khetha ifayile ye- itemplate ye-imeyile ngohlobo lwethemba, kwaye utsho ngokuthe ngqo into oza kuyicela, kunye nento oza kuyinika imbuyekezo.
Khumbula ukwenza umyalezo wakho wokufikelela ube ngumntu. Abantu abayithandi iileta ezifana ne-bot, kwaye bahlala becima ngaphandle kokufunda.
PhawulaUkuphanda amathemba akho kukunika elinye ithuba lokujonga iiwebhusayithi zabo ukuba zibalulekile kwaye zisemgangathweni kwaye ususe amanye amathemba kuluhlu. Kwakhona, ukuba ufumanisa ukuba ezinye zewebhusayithi zizalathiso zeshishini, iwebhusayithi ye-2.0, okanye ezinye iindawo apho ukhululekile khona ukuba wenze umxholo, akukho sidingo sokufikelela kubo. Bahambisa kuluhlu olwahlukileyo kwaye ubeke ii-backlinks zakho nakweyiphi na ifomathi efunekayo.
5. Ukujonga iProfayile yakho ye-Backlink
Ukubeka iliso kwimbali yakho ye-backlink kuya kukuvumela ukuba ubone ukuba i-backlinks entsha yenze naluphi na utshintsho kwizikhundla zakho, qaphela ukuba kukho into engahambanga kakuhle, kwaye uphande nayiphi na imiba evelayo.
Ukungena ngesiquphe kwe-backlink esemgangathweni esemgangathweni yenye yezinto ezinokufuna ingqalelo yakho. Isenokuba yi Uhlaselo olubi lwe-SEO ngomnye okhuphisana nabo, okanye amakhonkco anokuvela ngokwasemzimbeni, okanye isenokuba yiarhente yakho ye-SEO ethenga amakhonkco asezantsi kwiwebhusayithi yakho. Kodwa nokuba siyintoni na isizathu, ukunyuka ngequbuliso kwamakhonkco e-spammy kunokutsala umdla kaGoogle kwaye ufumane isohlwayo. Ukufumana kwakhona isohlwayo esinjalo kungathatha kwiinyanga ezininzi ukuya, ewe, soze.
Ukuba ubona ukukhula okukrokrisayo kwenani le-backlinks kwiwebhusayithi yakho, qiniseka ukuphanda ukuba ngaba ezi zixhumanisi zilungile okanye zibi kwaye zivela phi. Ukuba amakhonkco angalunganga, zama ukunxibelelana nabanini bewebhusayithi kwaye ubacele ukuba basuse okanye ubuncinci balandele amakhonkco. Ukuba ayinakwenziwa, unokusebenzisa Isixhobo se-disvow sikaGoogle ukuxelela uGoogle ukuba awunanto yakwenza nabo.
Ukuhla ngesiquphe kwi-backlink ekumgangatho ophezulu yenye into enokufuna ingqalelo yakho. Oku kunokwenzeka ngenxa yokuba iphepha elidibanisa lihanjiswe kwenye i-URL, lacinywa, umxholo wephepha utshintshile, okanye i-backlink ngokwayo isuswe okanye ifakwe endaweni yekhonkco kumncintiswano wakho. Kule meko, kuya kufuneka unxibelelane neqabane elingasemva ukuze ubone okwenzekileyo kwaye ubuyisele i-backlink ukuba kunokwenzeka.
Ungalibali ukubeka esweni iiprofayili ze-backlink okhuphisana nazo, nazo. Nika ingqalelo ekunyukeni kwangoko ngesixa se-backlink. Ukuba zikhona, jonga ukuba zivela phi. Ukuba ithemba elitsha libonakala linokuthenjwa, cinga ukulubandakanya kufikelelo lwakho, nawe.
Uhlalutyo lokhuphiswano yeyona ndlela isebenzayo yokufumana umgangatho we-backlink. Ayikho enye indlela enokuthi ihambise eli nqanaba lokufaneleka. Kwaye izikhokelo zishushu nazo, kuba abo bakhuphisana nabo sele bekwazile ukubeka i-backlinks yabo apho. Ngokuqinisekileyo yindawo yokuqala ukwakha i-backlinks yakho okanye into enokuzama ukuba awuzange uzame ngaphambili.
tags: Uhlalutyo lwe-backlinkUhlalutyo lomncintiswano we-backlinkukufikelela kwi-backlinkubuhlakani be-backlinkukuxhuma umvauhlalutyo lwesincokoukudibanisa isakhiwoIphulo lokwakha ikhonkcoUkunxibelelana nokwakha ikhonkcoikhonkcouphando lwezinto eziphilayoenjini yokukhangela nounUhlalutyo lwentoseo amandla